संस्थापनइतर पक्षीय जिल्ला सभापतिको भेला : देउवालाई सच्चिन, पूर्वसंस्थापनलाई मिल्न दबाब | Hindu Khabar
August 7, 2020 5:51 pm || ॐ भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ||
संस्थापनइतर पक्षीय जिल्ला सभापतिको भेला : देउवालाई सच्चिन, पूर्वसंस्थापनलाई मिल्न दबाब
२३ पुष २०७६, बुधबार ०८:३९ मा प्रकाशित In: Breaking news, पत्रपत्रिका, मुख्य खबर, राजनीति
नसच्चिए महाधिवेशन हुँदैन
कृष्ण सिटौला, केन्द्रीय सदस्य
विधानले चलेको पार्टी, विधानमा कुरा नमिल्दा शीर्ष नेता बसेर चलाएको पार्टी हो । ठूला समस्या आउँदा पनि नेताहरूले मिलाएका हुन् । सहमतिबाटै जानुपर्छ । बहुमतको आधारमा महाधिवेशनको तालिका, सक्रिय सदस्यताको विषयमा निर्णय गरेर महाधिवेशन हुन सक्दैन ।
गलत निर्णय सच्याउनुपर्छ
डा. शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य
सभापतिको निर्णय महाधिवेशनलाई निष्पक्ष रूपमा हुन नदिने तयारीस्वरूप आएको हो । विधानको धारा निलम्बनले स्वतन्त्र अधिवेशन हुँदैन भन्ने देखाएको छ । जसरी हुन्छ, गलत निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ । नसच्चिएसम्म आवश्यक पर्दा निर्णयलाई अवज्ञा गरेर जान तयार हुनुुपर्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
संस्थापन इतरपक्षीय कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले एकलौटी निर्णय सच्याउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । दोस्रो दिनको छलफलमा १४ जिल्लाका सभापतिले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकासहितको बहुमतको आधारमा गरिएको निर्णयलाई सच्याएर सहमतिमा पुनः महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन माग गरेका हुन् ।
विधानअनुसार भ्रातृसंस्था र विभाग गठन गर्न पनि माग गरेको काभ्रे कांग्रेस सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिए । बहुमतबाट निर्णय भएको भन्दै संस्थापनइतरपक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेपछि आफूनिकट जिल्ला सभापतिहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ । ‘अघिल्लो दिनको जस्तै जिल्ला सभापतिहरूले महाधिवेशनको एकलौटी निर्णय सच्याउन र विधानको धारा कुल्चने गरी भएको निर्णयलाई सहमतिको आधारमा सच्याउन माग गर्नुभएको छ,’ आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केन्द्रीय सभापतिबाट उठाइएको गलत कदम नसच्चिने हो भने सामूहिक राजीनामा दिएर जानुपर्ने मतसमेत उहाँहरूले राख्नुभएको छ ।’
मंगलबारको छलफलमा नुवाकोटका जगदीश्वरनरसिंह केसी, पाँचथरका नरेन्द्र केरुङ, कालीकोटका हर्षबहादुर बम, सिन्धुलीका उज्वलप्रसाद बराल, बाँकेकी किरण कोइराला, अर्घाखाँचीका विष्णु मुस्कान, गुल्मीका भुवन श्रेष्ठ, इलामका हिमालय कर्माचार्य, मुगुका खड्गबहादुर शाही, ताप्लेजुङका लीला बोखिम, कपिलवस्तुका सुरेन्द्र आचार्य, काठमाडौंका सबुज बानियाँ, सिन्धुपाल्चोकका विकास लामा र सोलुखुम्बुका विनोद बस्नेतले धारणा राखेका थिए ।
सरकारले कांग्रेसलाई ब्ल्याकमेल गरी बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडीसहितका काण्डमा मुछे पनि कांग्रेस रक्षात्मक बनेको जिल्ला सभापतिहरूको भनाइ छ । प्रतिपक्षीका रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्न नसक्दा कांग्रेस विवादमा पर्ने गरेको उनीहरूको जिकिर छ । नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले जिल्ला सभापतिहरूलाई परामर्शका लागि बोलाएका हुन् ।
जिल्ला सभापतिलाई शशांकको डिनर
परामर्श बैठकको लागि आएका जिल्ला सभापतिहरूलाई महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले डिनर दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा भेलालगत्तै शशांकले सभापतिहरूलाई डिनरका लागि एयरपोर्टस्थित एक होटेलमा आमन्त्रण गरेका थिए । १४औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा महामन्त्री शशांकले सक्रियता बढाउँदै लगेका छन् ।
कसले के भने ?
किरण कोइराला (बाँके)
पार्टीभित्र असल इमानदार कार्यकर्तालाई अनुशासनको आतंक सिर्जना गरेर अपमानित खेल सुरु भएको छ । व्यक्तिको अहंकारबाट पार्टीलाई बचाउनुपर्छ ।
विष्णु मुस्कान (अर्घाखाँची)
हाम्रो अभियान पार्टी बचाउ अभियान हो । पार्टीमा गलत भइरहेको छ भनेर गाउँगाउँका साथीहरूले बुझिसक्नुभयो । सभापतिलाई पार्टी बचाउन तयार हुनुस् भन्ने सन्देश दिनुपर्छ र बहुमतको निर्णय सच्याएर जान दबाब बढाउनुपर्छ । सभापतिलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिन हामी (सभापतिहरू) सामूहिक रूपमा तयार छाैँ।
हिमालय कर्माचार्य (इलाम)
एकातिर सभापतिको पेलान हुँदा तपाईं (नेता)हरू विभाजित हुनुहुन्छ । तपाईंहरूले आजै घोषणा गर्नुस् हाम्रो नेता यो हो भनेर । एउटा नेता अगाडि सार्नुभयो भने तपाईंहरूलाई फुटाएर राज गर्न खोज्नेहरू परास्त हुनेछन् । उनीहरूको दादागिरी त्यसपछि बन्द हुनेछ ।
सवुज बानियाँ (काठमाडौं)
हामीले पहिलेदेखि नै नेताहरूको बीचमा एकता चाहेका थियौँ । अहिले परिस्थिति अनकूल बनेको छ । टिममा कसैले घात नगरी अघि बढ्ने हो भने अब हामी कांग्रेस सुधार्न सक्छौँ ।
उज्वल बराल (सिन्धुली)
प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्रै प्रजातन्त्र खोज्नुपर्ने दुभाग्यपूर्ण अवस्था आएको छ । आफ्नो पार्टीभित्र अधिनायकवाद लाद्ने सभापतिले नेकपा सरकारले लादेको अधिनायकवादको विरोध गर्दा जनताले पत्याएनन् ।